Fotoana 4 rehefa mandany vola be loatra isika
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Fotoana 4 rehefa mandany vola be loatra isika
Fotoana 4 rehefa mandany vola be isika ary inona no hatao amin'izany
Ny fanapaha-kevitra ara-bola no laharana fahatelo farany malaza (45%) amin'ny taona 2021, araka ny angon-drakitra Urban Plates / Ipsos. Na inona na inona fanapahan-kevitrao, na raha misafidy ny tsy hametraka ianao dia zava-dehibe ny hatsaram-panahy amin'ny tenanao eny an-dàlana. Ary raha manakana anao tsy hahatratra ny tanjonao ara-bola ny fandaniam-bola be loatra, indreto misy fotoana efatra mety handanianao vola be loatra sy fomba hampihenana izany fandaniana izany.
Mandritra ny fialantsasatra
Araka ny voalazan'ny National Retail Federation, ny mpanjifa any Etazonia dia nanantena ny handany $ 1,000 + mandritra ny fetin'ny fialantsasatra 2020. Indrindra mandritra ny fialantsasatra dia mora ny mandany nefa tsy manombana ny simba.
Ny lakilen'ny famotehana ity tsingerina ity dia ny fahatsiarovan-tena momba ny fandanianao. Tohizo ny fifandanjan'ny carte de crédit anao, araho raha mandany mihoatra ny vola tadiavinao ianao na mihoatra ny tena zakanao, ary fantaro raha afaka mandoa irery ny mizana ianao na mila mandinika fomba hafa toa ny fampindramam-bola fanamafisana trosa.
Rehefa vakansy na ivelan'ny tanàna isika
Nandatsaka amboaram-bary fotsiny ianao tamin'ny sidina an-tanety sy ny Airbnb efa rovitra. Azonao atao koa ny mandray io fiara nohofana nohavaozina io, sa tsy izany? Rehefa manomboka misokatra indray ny dia, maro ny hetsika amerikana no hanao famandrihana. Saingy mijanona ny teboka - rehefa mandeha ianao, dia manjary tsy mahita ny lavitra intsony, ka manamora ny fandanianao vola be.
Mamo amin'ny fety vetaveta ianao ary mividy tifitra boribory ho an'ny andiany vehivavy 15 — ny antsasaky ny fihaonanao voalohany. Aleo havaozina ho any Patrón fa tsy io booze ambany io raha mbola eo ianao. Rehefa manam-potoana tsara sy amin'ny fomba mahafaly anao eo noho eo ianao dia ny fifandanjan'ny carte de crédit no zavatra eritreretinao farany. Apetraho eo amin'ny vakizoko izany!
Na mikasa ny hanao fitsangatsanganana haingana amin'ny faran'ny herinandro ianao na mandritra ny fialan-tsasatry ny mpianakavy mandritra ny herinandro, dia ilaina ny manao teti-bola toa ny tianao amin'ny andavan'andro Raha tokony hampiasa ny teti-bolanao isam-bolana dia mamorona teti-bola isan'andro misaraka amin'ny dianao, kaonty ny vola ilainao handanianao amin'ny sakafo sy fitateram-bahoaka, ary koa hanomezana toerana ho anao miaina zavatra toy ny fahatsiarovana sy ny alina any ivelany.
Rehefa mampiasa carte de crédit tsy tapaka isika
Manjary tsy dia mahazatra intsony ny mitondra vola — indrindra ireo mpivarotra am-barotra mankafy ny fifanakalozana karatra mandritra ny areti-mandringana — izay manamora kokoa ny fandaniana be loatra. Fa rehefa mandany amin'ny carte de crédit-nao ianao dia tsy manana valiny mampihetsi-po toy ny rehefa mandoa vola. Miaraka amin'ny karatrao dia soloanao, averinao ao anaty kitapom-bolanao ary mandehana ny andronao. Rehefa mampiasa vola ianao dia mila manolotra ny vola amin'ny olon-kafa ary mijery azy manjavona.
Raha mikasa mialoha ianao ary mametraka fetra manodidina ny fampiasanao ny carte de crédit anao — na raha miraikitra amin'ny vola ianao dia mety ho hitanao fa voafehinao bebe kokoa ny vola laninao.
Rehefa resy amin'ny doka media sosialy kendrena izahay
Isika rehetra dia mety nahita ny famoizam-po tamin'ny fotoana iray na tamin'ny fotoana hafa, indrindra tao anatin'ny areti-mandringana efa ho herintaona izay nanidiana anay maro tao anatiny. Ary na Instagram izany na tantara iray, dia mety ho tafintohina tamin'ny doka nokendrena hanaovana akanjo fandraisam-bahiny izay tsy nataonao ianao tena mila fa toa comfy be ka mila mividy azy. (Na famandrihana ranom-boankazo maitso satria fantatr'i Big Brother fa manandrana salama kokoa ianao amin'ny 2021.)
Ny fomba iray ahazoan'ireto doka ireto anao dia ny fanolorana fifanakalozana 20% na fandefasana maimaim-poana raha mandany vola iray ianao. Fa raha mandany $ 30 mihoatra ny tokony ho izy ($ 0) ianao, na mitahiry $ 7.99 amin'ny fandefasana fotsiny, tena mihatsara ve ianao?
Ny fametrahana fetran'ny fotoana amin'ny fampiasanao media sosialy dia afaka manampy anao hisoroka ireo karazana doka ireo — ary mety hanome anao fisondrotana ara-pahasalamana tena ilaina aza.